Macluumaadka ku saabsan jadwalka hawlaha ”Hawlaha gudaha Iswiidhan” | Informationsverige.se
Macluumaadka ku saabsan jadwalka hawlaha ”Hawlaha gudaha Iswiidhan”
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Macluumaadka ku saabsan jadwalka hawlaha ”Hawlaha gudaha Iswiidhan”
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 30 6 2022
Jadwalka hawlaha ”Hawlaha gudaha Iswiidhan” ee horey ugu jiray Informationsverige.se waa la xiray sabab farsamo awgeed. La xiriir degmadaada ama ka raadi bogooda intarnetka si aad u aragto nooca hawlaha laga helayo degmadaada.
Hel hawlo ka socda degmadaada
In laga qaybqaato degmada ama ururada kala duwan hawlahooda waxay bixisaa fursad ah in la barto dad cusub oo lagu tababarto af Iswiidhishka.
Degmooyinka iyo ururadu waxay mararka qaarkood hayaan hawlo loogu talogalay dadka ku cusub Iswiidhan si ay u fududaato in la soo dhex galo bulshada Iswiidhishka.
Degmooyin badan iyo ururo is xilqaamay ayaa ka shaqeeya in la caawiyo dadka ku cusub Iswiidhan inay xiriir la sameeyaan Iswiidhishka. Magaca hawshu way kala duwanaan kartaa, waxaa lagu magacaabi karaa saaxiib luqad, hagaha qaxoonti, caawiye qof cusub, la taliye ama saaxiib.
La xiriir degmadaada ama ka raadi bogooda intarnetka si aad u aragto nooca hawlaha laga helayo degmadaada.
Dheeraad ku saabsan Iswiidhan degmooyinkeeda iyo goboladeeda ka akhri bogga ”Gobolada iyo degmooyinka gudaha Iswiidhan” kuna qoran Informationsverige.se.